Somalia: Diblamaasiyiinta Wakiillada Beesha Caalamka Oo Kulan La Yeeshay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Xilligeedu Dhammaaday - #1Araweelo News Network
Somalia: Diblamaasiyiinta Wakiillada Beesha Caalamka Oo Kulan La Yeeshay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Xilligeedu Dhammaaday
Muqdisho(ANN)-Diblamaasiyiinta ku sugan Soomaaliya, ayaa ku mashuulsan sidii ay dhinacyada hoggaamiyaaysha Somalia ee sida weyn isugu khilaafsan siyaasada isugu soo jiidi lahaayeen, waxaana jiray maamlihii u danbeeyay kulamo gooni gooni ah oo la yeelanayeen dhinacyada.
Ra’iisal Waasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilligeedu dhammaaday Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Diblamaasiyiinta Wakiillada ka ah Beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya, kuwaas oo ay ka wada hadleen dardar gelinta iyo dhammeystirka arrimaha doorashooyinka iyo soo afjarida khilaafka.
Diblamaasiyiinta Wakiillada ka ah Beesha Caalamka iyo Ra’iisal wasaare Rooble, ayaa kulanka ku faaqdiday sidii xal looga gaadhi lahaa muranka, isla markaana hawsha loo bilaabi lahaa si waafaqsan heshiiskii 17-kii September,2020 iyo soo jeedintii guddigii farsamada ee Baydhabo.
War-saxaafaeed kooban oo kasoo baxay xafiiska Ra’iisal Wasaare Rooble kulanka kaddib ayaa lagu sheegay inuu shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka u xaqiijiyay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay xal u helida arrimaha doorashooyinka iyo in ay si shuruud la’aan ah ugala xaajooto cid kasta oo ay khusayso, welina ay furan tahay gogoshii wadahadalka arrimaha doorashooyinka.
“Waxaan mar kale u xaqiijinnay shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka in dowladda Federaalka Soomaaliya diyaar u tahay in doorasho dalka ka dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan, si waafaqsan heshiisyadii doorashada la xidhiidhay ee hore loo gaadhay, wadahadalna lagu xalliyo madmadowga jira” ayaa lagu yidhi war-saxaafeedka.
Dhinaca kale, waxa lagu sheegay war-saxaafeedka in dowladda Federaalka Soomaaliya ay mar kale ugu baaqeyso madaxda dowlad-gobolleedyada ka maqan Shirka Wadatashiga Qaran ee Arrimamaha Doorashooyinku in ay ku soo biiraan, si arrimaha lagu kala duwan yahay loogu xalliyo miiska wada hadalka, dalkana ay uga qabsoonto doorasho daah-furan.
Madaxda maamul gobolleedyada Soomaaliya ee JubaLand iyo Puntland ayaa hore ugu gacansaydhay in ay ka qaybgalaan shirkaa, iyagoo ku xidhay shurruudo adag.